ध्यानले बढाउँछ खुसी : अमेरिकी वैज्ञानिक | Nagarik News - Nepal Republic Media
६ चैत्र २०७४ ६ मिनेट पाठ
काठमाडौं – मानिस केले खुसी हुन्छ? खुसीका मापन अनि सीमा के–के हुन्? लामो समयदेखि यी दार्शनिक जिज्ञासामाथि बहस अनि घोत्ल्याइँ जारी छ।
दलाई लामाको प्रेरणाले ‘न्युरोसाइन्स’ र ध्यानसम्बन्धी अनुसन्धान अगाडि बढाएको डेभिड्सनले बताए। सात वर्षअघि डेभिड्सन र उनको टिमले ध्यान अवस्थामा बौद्घ भिक्षुको मस्तिष्कको अवस्था कस्तो हुन्छ भनी अनुसन्धान गरेको थियो। इइजी, एमआरआई र एफएमआरआईको सहायताबाट ‘ब्रेन स्क्यान’ गर्दा अन्य साधारण व्यक्तिको भन्दा ध्यान गर्ने व्यक्तिको मस्तिष्कको तरंग फरक पाइएको थियो। सतिध्यान (माइन्डफुलनेस), करुणा (कम्प्यासन) र संज्ञानात्मक उपचार (कोग्न्याटिक थेरापी) लगायत विषयमा उनका दर्जनौं अनुसन्धानमूलक लेख विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा छापिएका छन्।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७४ ०६:०५ मंगलबार